Weerar Gaari Looga Qabsaday Dowlada Federaalka. – Bogga Calamada.com
Weerar Gaari Looga Qabsaday Dowlada Federaalka.
August 29, 2016 6:21 pm Views: 12
Wararka ka imaanaya degmada Buurhakabo ee gobalka Baay waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay duleedka degmadaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay weerar dhabba gal ah u dhigeen kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka Murtadiinta oo kasoo baxay degmada Buurhakabo islamarkaana doonayay iney dhac ka geystaan mid ka mid ah deegaanada dhaca duleedka degmadaasi.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in dagaalkaasi lagu dilay hal askari kaasi oo Mujaahidiinta ay ka qaateen qori iyo boosh uu ku hubeysnaay.
Sidoo kale Idaacada Andalus waxey intaasi raacisay in ciidamada Xarakada Shababul Mujaahidiin ay qaniimeysteen gaari nooca Hoomeyda ah oo ay wateen maleeshiyaatka dowlada Ridada ee kamiinka loogu dhigay duleedka degmadaasi.
Dhanka kale kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya waxaa saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal ah loogu dhigay duleedka deegaanka Buurdhuxulle ee gobalka Bakool’iyadoona si rasmi ah aan loo xaqiijin khasaaraha ka dhashay kamiinkaasi.